Ụbọchị My Pet » 6 Bịara n'Ezi Oge Atụmatụ maka Ịlụ echeta!
E nwere bụ oké eziokwu na okwu, "Ịhụnanya bụ ìsì."
Ọ na-kpatara nke mere banyere 50% nke di na nwunye na U.S. na-agba alụkwaghịm.
Ọ bụ ezie na amaghị nwere ike inye bliss ọtụtụ ebe, na-ewere on a onye maka ndụ bụ otu n'ime ha. Ihe ị na-amaghị pụrụ iduga kwa ụbọchị ejije, nchegbu, ogbenye ike, unmet na-atụ anya, obi ụtọ, obi, na-emecha ... gbubiri agbatị.
Ma, e nwere ozi ọma.
Ị na-adịghị na-egwu mmekọrịta ruleti na ọdịnihu gị. Ọ bụ na o kwere omume dee a obi ụtọ agwụcha gị akụkọ ịhụnanya, ma ọ bụrụ na ị na-eche n'ihu tupu gị na onye òtù ezinụlọ.
Isiokwu a na-zubere maka nzube a.
Ọtụtụ n'ime ndị a kwuru na-atụ aro na-adabere ezi adanlodu Ole 'nkịtị uche, ahụmahụ na mgbagha. Ndị ọzọ na-n'ikike nke hit eziokwu show, Bridezilla.
Ebe a na-a ihe ole na ole i kwesịrị ịma dịkwuo gị Ịhụnanya IQ.
6 Ụkpụrụ na omume na-Ịlụ echeta:
1. Ghọta na alụmdi na nwunye ga-adịghị idozi ihe ọ bụla na-agbajikwa.
Nke ahụ dị mma. M asị na-a "Debbie Downer" ebe a; ma ọ bụ eziokwu. Iwe management mbipụta, obere nwa, ịgba chaa chaa, ịchọ ọdịmma onwe, na shopping-eri ahụ ga ghara gwọrọ nanị n'ihi na mmekọrịta na-elu ka a alụmdi na nwunye okwa. O di nwute na, ewere on a mate dị nnọọ ka ịzụ "dị ka" zuo. Ihe ọ bụla ọnọdụ, ọ bụ gị ugbu a. Saa anya iji zere asịwo si ụta.
2. Ọ bụ ezie na iche na-adọta, di na nwunye na isi commonalities agbasaghị adịru ogologo.
Ọ dịghị onye kwesịrị ịlụ a carbon oyiri nke onwe ha. Ọ ga-abụ na-agwụ ike, na-enye obere n'ụzọ nke ibu na obi ụtọ. N'agbanyeghị, e nwere ihe ụfọdụ na unu abụọ ga-enwe na-emekarị. Nke a ga-agụnye ihe mgbaru ọsọ gị, gị uru usoro, ma ọ dịkarịa ala otu ma ọ bụ abụọ ọdịmma ma ọ bụ n'ihe omume ntụrụndụ. Lee ụfọdụ ọzọ ebe tụlee: Olee otú ọtụtụ ụmụaka-eme abụọ na ị chọrọ? Big agbamakwụkwọ ma ọ bụ obere? House ma ọ bụ na ulo? Inwe echiche ebe a?
3. Ọ bụrụ na ị na-elele ha email, agbaji n'ime ha na-elekọta media ndekọ, ma ọ bụ chọpụta ha ekwentị oku, "Houston e nwere ihe a nsogbu."
The ịga nke ọma nke ọ bụla ogologo oge, oké njọ na-enwe mmekọrịta wuru n'elu obi. Ma ma na ị nwere ya ma ọ bụ na ị na-eme adịghị. Ezie na ụfọdụ folks na-ekwu na ọ bụrụ na e nweghị ihe ọ bụ zoo, ha ga-enwe ike nwere carte Blanche ngafe ka ndị nwunye ha na akaụntụ. Ọ bụchaghị–onye obula kwesịrị a ogo nzuzo. Ọzọ, ntụkwasị obi bụ kwesịrị! Nke ahụ bụ n'ezie, ma ọ bụrụ na onye gị na nwere a mere eme nke aghụghọ. Nke ahụ bụ ihe ọzọ isiokwu n'oge ọzọ.
4. "Lee miri n'ihu gị na-amali elu,"Onyeikpe Mablean-eji mgbe niile na-ekwu na ya na-ewu ewu TV n'ụlọikpe show. Ma ọ bụ ihe kwesịrị ịṅa ntị na.
Tupu ị "na-awụlikwa elu brum" na-ewepụta oge dị mkpa iji mara onye nke ọzọ. Erite a ole na ole a kara ọnụ. Lee otú ọ / ọ behaves ugboro nchegbu, mgbe ihe dị mma ugboro na ihe ọjọọ, n'oge ọrịa na ahụ ike, n'ihi na ezigbo results.
5. Nọgidenụ na-ebute ụzọ ná ndụ anya otú kwesịrị ekwesị.
Kwa izu a Bridezilla, ndị na-ekiri àmà smart folks-eme ụfọdụ kama mkpari mkpebi. Atụla otu n'ime ha. A bụ otu ihe atụ. A nwunye ga-anọ $60,000 na a agbamakwụkwọ, n'agbanyeghị na ọ esetịpụ a ọrụ ebe ọ na-eme $24,000 a afọ. Di na nwunye, n'ihi ya, na-amalite ha n'otu na ibu arọ nke ụgwọ ịnya na ha Akwadoo. Ma ọ bụ ndụ na ha na-iwu nke mbụ afọ ole na ole. Ọ bụghị jụụ. Ndi ị maara na otu nke na-eduga na-akpata ịgba alụkwaghịm bụ ego? Cheta na a agbamakwụkwọ ahụ bụ nanị otu ụbọchị, mgbe a alụmdi na nwunye n'obi ka ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ ezie na ọ bụ eke maka a nwunye na-chọrọ ka obi dị ka a "Adiaha" na ya n'ụbọchị ahụ pụrụ iche, o kwesịghị anọ dị ka "eze."
6. Lekọtara okpukpe n'ime ihunanya akụkụ.
Inwe a ntọala ime mmụọ nwere ike inyere weather oké ifufe nke ndụ, na-enye ike ma na-eduzi n'oge ihe isi ike.
Soro ndị a isii kadinal iwu nke alụmdi na nwunye ruo ọtụtụ afọ nke wedded bliss.